Global Voices teny Malagasy · 12 Oktobra 2017
Tantara tamin'ny 12 Oktobra 2017
Iran: Nivoaka Ny Efitra Ireo Diplaomaty Nandritra Ny Kabarin'i Ahmadinejad
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Oktobra 2017
Nipoitra tamin'ny lohatenim-baovao lehibe indray ny filoham-pirenena Iraniana Mahmoud Ahmadinejad androany, raha nanondro an'i Isiraely ho "fanjakana mpanavakavaka" tamin'ny kabariny nandritra ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fanavakavahana tany Genève, Soisa. Nivoaka ny efitra ireo solontena avy amin'ny firenena Eoropeana maromaro ho fanoherana ny fanamarihan'i Ahmadinejad.
Azia Atsinanana12 Oktobra 2017
Maty tao amin'ny fonjan'i Evin tao Teheran tamin'ny 18 martsa i Omid Reza Mir Sayafi, bilaogera sady mpanao gazety Iraniana 29 taona. Nomelohina higadra roa taona sy tapany izy tamin'ny volana Desambra noho ny fanimbazimbana ireo mpitondra fivavahana sy fanaovana fampielezan-kevitra manohitra ny Repoblika Islamikan'i Iran.
Iran: Hetsika Maitso Vonona Amin'ny Fihetsiketsehana 11 Febroary
Vonona ny Hetsika Maitso hihantsy ny fitondrana Iraniana amin'ny hetsi-panoherana indray - amin'ity indray mitoraka ity, dia atao mandritra ny tsingerintaona faha-31-n'ny Revolisiona Islamista amin'ny 11 Febrorary (22 Bahman).
“Tokony Hiresaka ny Tolon'ny Tompotany Isika, Kanefa Mila Mankasitraka Ny Zava-bitantsika Ihany Koa “
Amerika Latina12 Oktobra 2017
Angamba lohahevitra sasantsasany ihany no resahin'ny fampitam-baovao ary manome ny fomba fijery amin'ny ankapobeny ny zava-mitranga izy, saingy tsy hita ny fototry ny olana, sy ny fomba fijerin'ny vondrom-piarahamonina indizeny sy ny firenena .